EU Inopa Bazi reDzidzo Mamiriyoni Matanhatu eMadhora
Sangano remubatanidzwa wenyika dziri mu Europe, re European Union, EU, rapa neChipiri hurumende yeZimbabwe mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora eku America kuti ibatsirikane munyaya dzefundo.
Mari iyi ichashandiswawo mukudzidzisa varairidzi pamwe nekupa mikana kune vana vechikoro vakagumira panzira kuitira kuti vaenderera mberi nechikoro.
Vachitaura pavapa hurumende mari iyi, mumiriri we EY muZimbabwe, Ambassador Aldo Dell’ Ariccia, vati mari yavapa iyi, iyo iri pasi pchikamu chechipiri che Education Transition Fund, yakaparurwa nehurumende muna 2009, ichabatsira zvikuru kusimudzira vana vari muzvikoro.
Va Dell’ Ariccia vati kunyange hazvo EU yakatemera mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nevamwe vavo vari mu Zanu PF zvirango, EU yakazvipira kuramba ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe munyaya dzebudiriro zvikurusei munyaya dzedzidzo.
Vaenderera mberi vachiti kutsigira nyaya dzefundo kuchengetedza ramangwana revana ve Zimbabwe zvinokonzera munyika kuti muve nerunyararo pamwe nekuvandudzwa kwehupfumi hwenyika.
Gurukota rezvedzidzo, Va David Coltart, vatenda EU nerubatsiro urwu uye vakurudzira sangano iri kuti risadzokere shure mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe.
VaColtart vatiwo mari yakawanda yehurumende iri kuperera munzendo dzemakurukota kunze kwenyika, mari inofanirwa kunge ichashandiswa munyika mukusimbaradza dzidzo nezvimwe zvinokosha munyika.
Hurumende payakapurura chirongwa ichi muna 2009, yakati dzidzo yemunyika yakanga yaderera zvikuru zvichitevera kuwondomoka kwakanga kwaitwa hupfumi hwenyika uye hurumende inoti inoda mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora kuti dzidzo yemunyika idzokere payakanga iri makare-kare.
Imwe mari yakambobviswa neEU nemamwe masangano yakashandiswa nehurumende kutenga mabhuku muzvikoro zvose zvehurumende munyika zvedzidzo yekutanga pamwe chete neye sekondari uye izvi zvakaita kuti mwana mumwe nemumwe akwanise kuwana mabhuku anoenderana nezvidzidzo zvaanenge achiita.